एक खुट्टा गुमाएका केबल बानिया अर्को खुट्टाको तनाबमा, संगीत मात्रै छ बाँच्ने सहारा (भिडियो)
काठमाडौँ । के सोचे थेँ जिन्दगीमा, के–के भयो आज’ राजेश हमाल, सञ्चिता लुइँटेल, रमित ढुंगाना आदि अभिनित चलचित्र ‘माया नमार’ को गीत हो यो । कसैको जिन्दगीको कुरा होइन। हो त केवल, केवल बानियाँको हो । हुन त सबैले सोचेजस्तो जिन्दगी कहाँ भोग्न पाउँछन् र ! केवल बानियाँले जस्तो भोग्नेहरु पनि सायदै होलान् । ताप्लेजुङबाट गायक बन्ने सपना बोकेर केवल १३ वर्ष पहिले झापा झरेका थिए । खेती–किसानी गर्ने बा–आमासँग मागेको पैसाले डेराको बास कतिञ्जेल चल्थ्यो र ! फेरि केवल एक्लै पनि त थिएनन् । उनले २०६० सालमा विवाह गरे ।
स्त्रीको सेतोपानी बग्ने देखि पुरुषको अण्डाकोष सुनिने सम्म एउटै घरायसी औषधी…